घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू निक पोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
हाम्रो निक पोप बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेम जीवन (प्रेमिका / पत्नी तथ्यहरू), नेट मूल्य, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, हाम्रो लेखले तपाईंलाई अंग्रेजी गोलकीपरको जीवनको महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको चित्रण गर्दछ जुन उहाँको प्रारम्भिक युगबाट शुरू भएको थियो (जब उहाँ जवान हुनुहुन्थ्यो) जब उहाँ धेरै लोकप्रिय हुनुभयो।
हाम्रो निक पोप बायो आफ्नो प्रारम्भिक जीवन र ठूलो वृद्धि बताउँछ। एट्रिब्युट: ईडट र बीबीसी।
हो, सबैलाई निक पोललाई उनको छिटो सजगता र ठोस क्याचहरूको लागि थाहा छ, तथापि, धेरैले निक पोपको जीवनी पढेका छैनन् जुन एकदम शैक्षिक हो। अब, थप विज्ञापन बिना, अगाडि बढौं।
निक पोप बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम "वाल" रहन्छ। निकोलस डेभिड पोपको जन्म १ 19 1992 April अप्रिलको दिन उनकी आमा ब्रिजेट पोप र बुबा डेभिड पोल, अंग्रेजी शहर र इ England्गल्यान्डको सोहमको नागरिक पर्शमा भएको थियो।
निक पोपको प्रारम्भिक ज्ञात बालबालिकाहरू मध्ये एक। 📷: बीबीसी
निक पोप परिवार मूल:
शट-स्टपर इ England्ल्यान्डको एक बोनाफाइड नागरिक हो। अनुसन्धानका परिणामहरू निर्धारण गर्न गरियो निक पोपको पारिवारिक पृष्ठभूमि संकेत गर्दछ कि -०-50०% अ English्ग्रेजी पश्चिमी इ England्ल्यान्डका धेरै नागरिकहरू जस्तै।
उहाँ -०-50०% अंग्रेजी हुनुहुन्छ। ।: Twimg
निक पोपको बढ्दो बर्ष:
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ कि सोहममा उनको बाल्यकालका क्षणहरूमा ऊ वास्तवमै फुटबलमा थिएन? उनले कहिल्यै प्रशिक्षणका लागि वा आफ्ना आमा बुबासँग फुटबल खेलहरू हेर्न जानको लागि कल्पना गरेनन्।
“उनी ओछ्यानमा पल्टिन् भन्थे 'मलाई फुटबल मन पर्दैन, म आउँदिन। उसलाई एउटा कारमा हाल्ने काम हाम्रोमा शैतान थियो। ”
निक पोपको आफ्नो शुरुआती जीवनका आमा बुबालाई याद छ।
निक पोप परिवार पृष्ठभूमि:
भाग्यशाली केटाका लागि, उसका अभिभावकले कृषिमा चासो लिने मध्यम-वर्गका नागरिकहरूसित गर्नु राम्रो थियो। तिनीहरू पनि फुटबल प्रेमपूर्ण प्रेमी थिए। यस्तै तिनीहरूको लागि स्वाभाविक थियो कि तिनीहरूले उहाँमा देखेका खेलकुद सम्भावनाहरू छोड्नु हुँदैन। निक पोप अभिभावकहरू आफ्नो बुढेसकालमा पनि एकै नजर आउँछन् र जीवनले भरिएका हुन्छन्।
निक पोपको मध्यम वर्गका अभिभावकको कृषिमा रुचि थियो। ।: Wtfoot
निक पोपको लागि क्यारियर फुटबल कसरी सुरु भयो:
उहाँ7वर्षको उमेरमा, निक पोप अभिभावकले पक्का गरे कि उनी इप्सविच एफसीको सिजन टिकट होल्डर थिए। धेरै समय नबित्दै ऊ आफैंले ब्लुजका लागि सातौं मुनि खेलिरहेको देखे र खेलमा यसलाई ठूलो बनाउने सपना देखे।
युवा पोप इप्सविच एफसीको साथ शुरुवात जीवन थियो जब उनी 7. वर्षका थिए। 📷: बीबीसी
यो इप्सविचमा थियो कि फुटबल प्रतिभाले धेरै जसो युवाहरूलाई बिताउँदछ। १ At मा, पोप पहिले नै क्लबको क्रममा उत्रिसकेका थिए जसरी उनी प्राय: जसो लाड्सको साथ आफ्नो यात्रा सुरु गरेका थिए।
निक पोप जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
यद्यपि, इप्सविचले गोलकीपिंग प्रतिभालाई अर्को तहको पदोन्नतिको लागि पर्याप्त ठान्दैन। त्यस्तै उनीहरूले उनलाई रिलीज गरे, एउटा विकास जुन उनलाई अत्यन्त हृदयविदारक थियो।
“इप्सविच एकेडेमीले मलाई १ 16 बर्षमा छोडे। तिनीहरू मेरो बाल्यकाल क्लब थिए। एक धेरै विनाशकारी अनुभव थियो, यस्तो भावना जुन म कहिल्यै भुल्न सक्दिन। यस्तो कुराले आत्मविश्वास र आत्मविश्वासलाई कम गर्न सक्छ जुन फुटबल खेल्नको लागि वास्तवमै चाहिने सबै कुरा हो त्यसैले यो मेरो लागि गाह्रो समय थियो। ”
भाग्यवस, तत्कालीन किशोरी मा छिटो थाल्यो। उनले वेस्ट सफोक कलेजमा पढ्न शुरू गरे। कलेजको नान-लीग क्लबसँग लिंक थियो - बुरी जो पोप सामेल भयो र आफूलाई छनौट गोल स्टपरको रूपमा स्थापित गर्न द्रुत थियो।
निक पोपको प्रख्यात बायो कहानी:
"भित्ता" लेरी १ टोलीमा चार्ल्टन एथलेटिकमा सामेल भयो २ May मे २०११ को बिली टाउनको बिलेरके टाउनमा २-१ ले जितेको बराबरीमा स्काउट्स द्वारा देखा पर्‍यो। उनले उनीहरुका लागि 1 24 भन्दा कम देखा परेन, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले उनलाई २०११ - २०१2011 बीच धेरै क्लबहरू (ह्यारो बरो, वेलिंग युनाइटेड, क्याम्ब्रिज युनाइटेड, एल्डरशट, योर्क शहर) मा loanण पठायो।
आफ्नो speण स्पेलको चरम सीमामा, पोप २०१ 2016 मा भर्खरै बढुवा भएको बर्नेलमा सामेल भए। उनले सेप्टेम्बर २०१ in मा क्रिस्टल प्यालेस (१-० जित) विरुद्ध प्रिमियर लिगमा डेब्यू गरे। उनी रूसको २०१ 2017 फिफा वर्ल्ड कपको लागि इ the्ल्यान्ड टीमको हिस्सा बन्न बोलाइएको धेरै लामो थिएन।
म यो बायो लेख्दा छिटो अगाडी, पोप हो प्रिमियर लिगमा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरहरू मध्ये एक। वास्तवमा, उनी सफा पानाहरूका लागि प्रिमियर गोल्डेन ग्लोभ अवार्ड जित्न नजिकै थिए तर म्यानचेस्टर शहरको स्टापरले थोरै कुट्यो। एडर्सन मोरालेस केवल एक खेल द्वारा।
निक पोपको गर्लफ्रेंड श्यानन हरोलोकलाई भेट्नुहोस्:
दीवाल (उसको उपनाम) को सम्बन्ध जीवनमा अघि बढ्दै, धेरैलाई थाहा छैन कि गोलकीराले श्यानन होरलॉकलाई डेट गर्दैछन् जुन एक पूर्व फुटबलर मचेस्टर सिटी मिडफिल्डर केविन हरोलककी छोरी हुन्। त्यहाँ lovebirds भेटे र डेटिंग शुरू गर्दा को बारे मा धेरै भनिएको छैन। जे होस्, हामी सचेत छौं कि केभिन हार्लक एक धेरै सहयोगी प्रेमिका हो।
उनी २०१ Russia वर्ल्ड कपको समयमा उनको राम्रो आधा समर्थन गर्न रसियाको स्टन्डमा पनि उपस्थित थिइन। त्यहाँ श that्का छैन कि विवाहबाहक कुनै छोरा वा छोरी नभएका लवबर्डहरूले निश्चित रूपमा कुनै पनि समय चाँडै अर्को चरणमा आफ्नो सम्बन्ध जीवन लिन्छन्।
निक पोपको प्रेमिका श्यानन होरलोक- IG लाई भेट्नुहोस्।
निक पोपको पारिवारिक जीवन:
गोलमालको लागि परिवार फुटबलको अगाडि र पछाडि आउँछ र हाम्रो रुचि प्रोफाइल एक अपवाद होईन। हामी तपाइँलाई निक पोप अभिभावक, भाईबहिनी र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं।
निक पोपको बुबाको बारेमा:
निक पोपको बुबा डेभिड एक कुशल किसान छन्। उहाँ mechan१ बर्ष भन्दा कम भन्दा कम समयका लागि यान्त्रिक खेतीको दिगो व्यवसायमा थिए। डेभिडसँग एउटा ट्रयाक्टर पनि थियो जुन उसले जवान पोप र उसको भाइ जोशलाई याद गर्दछ जुन उनीहरूले पाएको कुनै अवसरमा खेले।
डेभिड दशकौं देखि खेती मा ठूलो थियो - Wtfoot।
निक पोपको आमाको बारेमा:
ब्रिजेट प्रभावशाली गोलकीकीको आमा हुन्। उनी किंगको एली स्कूलमा पूर्व स्कूली शिक्षिका हुन् जहाँ निक एक विद्यार्थी भएको विश्वास गरिन्छ। डेभिडले जस्तै ब्रिजेट पनि सहयोगी हुन्छिन र उनको छोराको साथ घनिष्ठ बन्धन साझेदारी गर्दछ।
ब्रिजटले लामो समयदेखि Wtfoot को शिक्षकको रूपमा काम गर्यो।
निक पोपको भाई बहिनीहरूको बारेमा:
बर्लेली पौराणिक कथाको एक भाई जोश भनेर चिनिन्छ। जोश एक प्रतिभाशाली गोलकीपर हो जसले लेखनको अवधिमा सोहमको लागि आफ्नो व्यापार गर्दछ। भनिन्छ कि उहाँसँग अहिलेको स्थान भन्दा उच्च तहमा राम्रो गर्ने क्षमता छ। यद्यपि, शीर्ष उडान फुटबलमा स्विच उसको लागि सजिलो नहुन सक्छ किनकि उमेर अब उसको छेउमा छैन। निक पोप आमा बुबा दुवै जोश र निक सफलता मा समान रूप बाट गर्व गर्छन्। उनीहरू आफ्ना छोराहरूको लागि कुनै अन्य क्यारियरको लागि कामना गर्न सक्दैनन्।
निक पोपका आफन्तहरूका बारे:
गोल रक्षकको नजिकको परिवारबाट टाढा, उसको पुर्खाको विवरणहरू अज्ञात छ विशेष गरी यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, निक पोप का काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भान्जीहरू बारे धेरै कागजात गरिएको छैन।
निक पोपको व्यक्तिगत जीवन:
"पर्खाल" फुटबल अदालत को आयाम बाहिर एक समृद्ध जीवन छ र त्यहाँ खेल को बाहिर आफ्नो दुर्लभ शान्त व्यक्तित्व को बारे मा भन्न सकिन्छ कि धेरै छ। धेरै व्यक्तिहरू उहाँ ऊर्जावान, दृढ, स्वतन्त्र र आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला छन् भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्। परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउन सहयोगी निक पोपलाई फिल्महरू हेर्न, यात्रा गर्न, अन्य रुचिहरू र शौकहरूको बीचमा भिडियो गेमहरूको आनन्द उठाउन मन पराउँछन्।
निक पोपको जीवनशैली:
आउनुहोस् हामी कसरी उसको पैसा खर्च गर्छ र खर्च गर्छौं। के तपाईंलाई थाहा छ यस बायो लेख्ने यस घडीमा उसको १२ मिलियन युरोको कुल सम्पत्ति छ? पोपले त्यस सम्पत्तीको ठूलो हिस्सा आकर्षक ज्याला र तलबबाट बनायो जुन शीर्ष उडान फूटबल खेल्दै आउँछ।
ऊसँग अनुमोदनबाट प्रवाह हुने स्थिर स्ट्रीम पनि छ। यस्तै, इ England्ल्याण्डमा उसको महँगो घरको ग्यारेजमा पॉश कारहरू राख्ने उनको क्षमताको बारेमा कुनै शंका छैन।
निक पोपको तथ्यहरु:
हाम्रो गोलकीको बायो लपेट्नको लागि, यहाँ अ shot्ग्रेजी शट-स्टपरको बारेमा केहि बेवास्ता गरिएका तथ्यहरू छन्।
पोपको सम्भावित of१ को 80० अ of्कको एक औसत समग्र फिफा रेटिंग छ। यद्यपि गोलकीपरका फ्यानहरू उनीहरूको तुलनामा राम्रो छ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। जोर्डन पिकफोर्ड. के तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ? के बारेमा डेन हेन्डसनसन? दुबैको क्रमशः and 84 र points 87 अ .्कको सम्भावित रेटिंग्स छ।
Quite० एकदम निष्पक्ष छ तर ऊ अझ राम्रो छ - SoFIFA।
पोप धर्ममा ठूलो छैनन र आफ्नो सामाजिक मिडिया ह्यान्डललाई धार्मिक संगतिबाट वञ्चित राखेका छन। पोप - यद्यपि, असमानता उनको ईश्वरीय हुनुको पक्षमा धेरै छन्।
तथ्य #3- शैक्षिक पृष्ठभूमि:
धेरै फुटबल प्रतिभाहरु भन्दा फरक, पोप एक धनी शिक्षा पृष्ठभूमि छ। ऊ पहिलो पटक एलीको कि's्ग स्कूलको विद्यार्थी थियो र वेस्ट सफफोल कलेजमा छोटकरीमा अध्ययन गर्न गए। त्यसपछिको शैक्षिक खोजीले पोपले रोहेम्प्टन विश्वविद्यालयमा अन्य पाठ्यक्रमहरूको बीच खेल विज्ञान पढ्यो।
तथ्य #4- निक पोप तलब ब्रेकडाउन:
प्रति वर्ष £ 1,820,000 € 2,015,286 $ 2,404,975
प्रति महिना £ 151,667 € 167,940 $ 200,414
प्रति हप्ता £ 35,000 € 38,755 $ 46,250
प्रति दिन £ 5,000 € 5,536 $ 6,607
प्रति घण्टा £ 208 € 230 $ 275
प्रति मिनेट £ 3.47 € 3.8 $ 4.6
प्रति सेकेन्ड £ 0.06 € 0.07 $ 0.08
निक पोप कमाएको छ
तपाईंले यो पृष्ठ हेर्न सुरू गर्नुभए पछि।
माथिका वित्तीयले प्रकट गर्दछ कि एक अंग्रेजी मध्यवर्गीय परिवारबाट आएका व्यक्तिले बर्नेलले (२०२० तथ्या )्क) सँग निक पोलको वार्षिक तलब बनाउन लगभग years वर्ष २ महिना काम गर्नुपर्नेछ।
पुरा नाम निक पोप
जन्म मिति अप्रिल १ 19 1992 को १ XNUMX औं दिन
जन्मस्थान इ England्ल्यान्डको सोहम शहर
प्ले गर्दै गोलकीपिंग
आमाबाबुले ब्रिजेट (आमा), डेभिड (बुबा)।
भाई बहिनीहरू जोस (भाई)।
प्रेमिका श्यानन होरलॉक
सोख चलचित्रहरू हेर्दै, यात्रा गर्दै, भिडियो खेलहरू खेल्ने साथ साथै गुणस्तरीय परिवार र साथीहरूसँग बिताउँछन्।
तलब १. 2.1 मिलियन यूरो
नेट मूल्य १. 12 मिलियन यूरो
उचाइ Fe फीट, In ईन्च।
त्यहाँ निक पोप जीवनीको अन्य आकर्षक संस्करणहरू छन् तर तपाईं यससँग जाने निर्णय गर्नुभयो। त्यसका लागि हामी तपाईको जीवन कहानी पढेर धन्यबाद दिन्छौं। निस्सन्देह, निकले हामीलाई विश्वास दिलाउँदछ कि सफलताको पालो बुद्धिमती होइन।
Lifebogger मा हामी गर्व गर्दछौं बचपनका कथाहरू (निक पोप जस्ता) लाई प्रदान गर्नमा जसमा निष्पक्षता र सटीकता छ। यदि तपाईं कुनै अफिशमा भेट्नुभयो भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल टिप्पणी दिनुहोस्।
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 3